Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa si Buuxdo u Taageeray Qoondada Dumarka laga siiyay Labada Aqal Baarlamaanka – STAR FM SOMALIA
Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa si Buuxdo u Taageeray Qoondada Dumarka laga siiyay Labada Aqal Baarlamaanka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa si buuxdo u taageeray qoondada dumarka laga siiyay Labada Aqal Baarlamaanka, maalin ka dib markii Culima’udiinka Somaliyeed qaarkood, ay ku baaqeen in laga fiirsado qoondadaasi.
Madaxweynaha Somaliya, ayaa sheegay in siyaasad qaran oo leesla qaatay, ay tahay saamiga haweenka laga siiyay Baarlamaanka, isla-markaana aanay ahayn wax ay cid gaar ihi wadato.
Madaxweynaha oo Isniintii ka hadlaayay Magaalada Baydhabo, ayaa ku celiyay in heshiis lagu galay xaqiijinta qoondada dumarka ee Baarlamaanka, isagoona ballanqaaday in Villa Somalia ay taasi ka shaqayn doonto.
Waxaa uu ku baaqay in la soo gaba gabeeyo khilaafaadyada u dhaxeeya Somalida, si loo yegleelo dowlad cusub, waxaa uu intaa ku daray in waqtiga uu ka dhammaaday, isla-markaana aysan haysan fursado ay waqtiga isaga dayici karaan.
Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Somaliya, ayaa dumarka ku booriyay inay xoojiyan loolankooda ku aadan, sidii ay u heli lahaayen qoondada laga siiyay Baarlamaanka. Hablaha aan xiisanayn siyaasadda, ayuu ugu yeeray inay taageeran kuwa kale ee damacaasi uu ku jiro.
Isagoo hadalkiisa sii wata, ayuu ka dhawaajiyay in aanu jirin sharci ama qaynuun dumarka ka horjoogsanaya siyaasadda, sidaasi daraadeedna uu ku boorinayo ka qayb qaadashada siyaasadda dalka.
Hay’adda Culimada Somaliyeed, ayaa Axadii sheegtay in sharci ahaan aysan bannaanayn in dumarka lagu biiriyo siyaasadda, taasoo ay ku sheegeen dhaqan dibadda looga keenay Somalida.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa u muuqdo mid iska indho tiraya farriinta adag ee kaga timid Hay’adda Culima’udiinka Somaliyeed.
Madaxweynaha Somaliya oo gaaray magaalada Baydhabo